रबिको समर्थनमा पूर्वन्यायाधीश देखि बरिष्ठ कलाकारसम्म मैदानमा, हुदैछ यति ठुलो कार्य ! – PanchKhal Online
Home/समाचार/रबिको समर्थनमा पूर्वन्यायाधीश देखि बरिष्ठ कलाकारसम्म मैदानमा, हुदैछ यति ठुलो कार्य !
काठमाडौं– पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आ त्मह त्या प्रकरणमा मुछिएका संचारकर्मी रवि लामिछाने अहिले चितवन प्रहरीको हिरासतमा छन् । पुडासैनीले आ त्मह त्या गर्नु अघि छोडेको भिडियो सन्देशमा रविको नाम पोलेपछि उनीसँग पत्रकार युवराज कँडेल र नर्स अस्मिता कार्कीलाई हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
लामिछाने प क्राउ परे देखि नै पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । सोही प्रकरणका विषयमा चिया पसल देखि सामाजिक सञ्जालसम्म चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । रविका समर्थकहरू सडकमै पुगेर आ न्दोलन गरिरहेका छन् । नेता, कलाकार देखि प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालले लामिछानेलाई हिरासमै पुगेर भेटेका छन् ।
रविमा पक्षमा बरिष्ठ कलाकार देखि पूर्वप्रधानन्यायाधिस समेत देखिएका छन् । नाम चलेका कलाकारहरूले उनको समर्थनमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन् । न्यायिक छानविनको माग गर्दै कलाकारहरूले शनिबार संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका कलाकारहरूमा निर शाह, रामकृष्ण ढकाल, दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, शम्भुजित बाँस्कोटा, निखिल उप्रेती, रमेश उप्रेती, सञ्चिता लुइँटेल, अनुराग कुँवर, रमेश खरेल तथा विवेकशिल पार्टीकी नेतृ रञ्जु दर्शना लगायत रहेका छन् ।
संयुक्त पत्रकार सम्मेलन शनिबार बिहान पौने ११ बजे काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित रिपोर्टर्स क्लवमा हुनेछ । सञ्चारकर्मी लामिछानेलाई प्रहरीले शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा प क्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दै आएको छ । लामिछानेलाई छाड्न शुभेच्छुकहरूको माग छ । लामिछानेको पक्षमा जनमत देखिए पनि प्रहरीले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
कलाकारहरू मात्रै होइन पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले समेत रविको समर्थन गरेकी छन् । उनले रवि खराब मानिस नरहेको बताएकी छिन् ।खबरवाणी नामक युट्युव च्यानलसँगको कुराकानीका क्रममा कार्कीले न्यायालय कसैको प्रभावमा नपर्ने बताएकी छिन् । ‘रवि लामिछाने खराब मानिस होइन जस्तो लाग्छ’, उनले भनिन्, ‘रविले यति ठूलो अभियान चलाउँदा एउटा मान्छेलाई यसो गर्छन् जस्तो लाग्दैन ।’
कार्कीले भनेकी छिन्, ‘निर्दोष व्यक्तिले सफाइ पाउनुपर्छ । मुद्धा चलिहाल्यो । अदालतमा गइसकेपछि मु द्धा चल्छ । उनले सफाइ पाउँछन् । मलाई विश्वास लाग्छ ।’ रवि लामिछानेका विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता शुम्भु थापाले दिएको अभिव्यक्ति उचित रहेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले बताइन् ।
कार्कीले मुद्धाका विषयमा सडक तताउन नहुने बताइन् । रवि लामिछानेले न्यायालयबाट न्याय पाउने उनको भनाइ छ । राज्यले जनतालाई बोल्न दमन गर्‍यो भने सरकार नटिक्ने उनले बताएकी छिन् । न्यायालयमा एक–दुई जना दवावमा पर्नेहरू भएपनि न्यायाधीशहरू निष्पक्ष भएर न्याय दिने पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले बताइन् ।
उनले रवि लामिछाने मात्रै नभइ यस्ता मुद्धाका प्रकृतिलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि हेर्ने गरेको भन्दै न्यायालयमाथि अविश्वास गर्न नहुने बताएकी छन् ।
पाँचथरमा जस्तै अर्घाखाँचीमा दोहोरियो अर्को घ’टना, ज्वाईंले ताण्डव मच्चाउँदा…
असुरक्षित भएको महशुस भएमा सिधै मलाइ फोन गर्नुहोला’ म तपाई लाइ सहयोग गर्छु -आइजीपी सर्बेन्द्र
कुकर बनाउने वा सस्तोमा सुट बेच्ने बाहानामा कोहि घर आए होसियार ! विहारबाट नेपाल भित्रिए ‘प्रोफेसनल चो*र’